Sergio Ramos Oo Shaaciyey Kylian Mbappe & Erling Haaland Midka U Fudud In Real Madrid Ay La Saxeexato - GOOL24.NET
Sergio Ramos ayaa shaaciyey midka u fudud Erling Haaland iyo Kylian Mbappe in kooxdiisa Real Madrid ay lasoo saxeexato.
Los Blancos ayaa lala xidhiidhinayaa inay suuqa u geli doonto inay lasoo saxeexato dhaliye marka uu furmo suuqa iiba ciyaartoyda, waxaana farta lagu godayaa labada da’yar ee Kylian Mbappe oo qandaraaskiisa PSG uu sannad kali ahi ka hadhsan yahay iyo Erling Haaland oo dunida kaga yaabsaday goolal tiro badan muddo laba sannadood ah oo uu u kala ciyaaray Borussia Dortmund iyo RB Salzburg.
Sergio Ramos oo ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayay Twitterka ayaa shaaciyey in uu jeclaan lahaa in kooxdiisa Real Madrid ay lasoo wada saxeexato Mbappe iyo Haaland oo ah da’yarta ugu wanaagsan dunida waqtigan.
Laakiin waxa uu qiray in duruufo dhaqaale oo jira, sababteedana uu leeyahay xanuunka Korona ee sannadka buuxa dunidu u xidh-xidhan tahay, in uu kooxdiisa ku keenay in aanay yeelanin awoodda dhaqaale ee ay kula soo saxeexanayso labadoodaba.
Sidoo kale, waxa uu kala saaray PSG iyo Borussia Dortmund midkooda ay sahlan tahay inay bixiso dhaliyaheeda, iyadoo uu hoosta ka xariiqay in PSG ay lacag aad u sarraysa ku xidhayso kooxaha doonaya Mbappe.
“Waan jeclaan lahaa in labadooduba ay yimaaddaan Real Madrid, laakiin haddii uu midkood imanayo, waxa fudud in lala saxeexdo Erling Haaland” Ayuu yidhi Sergio Ramos.
Isagoo sharraxaya sababtana waxa uu intaas raaciyey: “Duruufaha dhaqaale darteed, aad ayay u adag tahay Mbappe, balse Haaland ba ma xuma sababtoo ah hammuunta uu u qabo goolasha, baaxaddiisa iyo xawaaraha orodkiisa… way fududdahay in heshiis lala gaadho Haaland.”
Real Madrid waxay u darsatay Cristiano Ronaldo oo goolashiisii ay tabayso tan iyo markii uu sannadkii 2018kii ka tegay kooxda, laakiin Ramos waxa uu sidoo kale qirayaa in xiddiga reer Portugal uu isaguna u darsaday kooxda, waxaanu yidhi: “Cris wuu khasaaray, Real na way khasaartay. Anigu maan ogolaadeen inuu tago sababtoo ah waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan, waxaanu nagu dhoweynayay inaanu koobab ku guuleysano.”